Phupha nge-canditad Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Phupha nge-canditad. Ukuqonda intsingiselo yamaphupha kunokuba luncedo ukuzazi ngcono. Ukuba unomdla wokwazi ukuba athetha ntoni amaphupha, qhubeka ufunda eli nqaku.
Xa sifaka isicelo kwenye indawo, oku kuhlala kuhamba nomnqweno wotshintsho. Sifuna ukuphinda siziqhelanise nomsebenzi wethu kwaye sifune imiceli mngeni ebesingayazi ngaphambili. Ngamanye amaxesha ezi zivuka kwangoko, umzekelo xa sisiya kwisemina yesicelo ukulungiselela inkqubo elandelayo yokukhetha. Siza kubhala ileta yokugubungela enomtsalane kangangoko kwaye sinike amava ethu kwi-resume. Kwimeko elungileyo, ekugqibeleni siya kumenyelwa kudliwanondlebe kwaye emva kodliwanondlebe siza kunikwa umsebenzi omtsha onqwenelekayo.
Nangona kunjalo, zonke ezi zinto aziyonxalenye yesicelo ngokwenyani, sinokuphupha ngazo. Usenokuziva usoyika ukuba sele uza kuba nodliwanondlebe kwaye ufuna ukuba ubeyisayo njengoko kunokwenzeka phambi komphathi wakho omtsha kunye noogxa bakho. Kodwa athetha ntoni loo maphupha?
Kukho iimeko ezithile zokuphupha zomfuziselo "weSicelo" esele inamava abantu abaninzi. Unokufumana ukuba balapha:
1 Uphawu lwephupha «Isicelo» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Udliwanondlebe: Yeyiphi imbonakalo endiyenzileyo ephupheni?
1.2 Ukurhoxisa! Yiyo loo nto iphupha lomsebenzi
1.3 Isicelo seVisa njengophawu lokuphupha
2 "Ukusetyenziswa" kwesimboli sephupha - ukutolika ngokubanzi
3 "Ukusetyenziswa" kwesimboli sephupha-ukutolikwa kwengqondo
4 "Ukusetyenziswa" kwesimboli sephupha-ukutolikwa kokomoya
Uphawu lwephupha «Isicelo» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Udliwanondlebe: Yeyiphi imbonakalo endiyenzileyo ephupheni?
Njengophawu lwephupha, udliwanondlebe lomsebenzi lumele ukhuphiswano. Kubomi bobuchwephesha kufuneka wazi amandla akho, amandla kunye neetalente zakho. Ngaphandle koko, ngekhe ukwazi ukubetha amaqabane akho omkhankaso okanye abachasi bakho. Oku kungakanani kuxinzelelo kozeleyo kuboniswa kwiimvakalelo zakhe ngexesha lokucinga kwephupha.
Ukurhoxisa! Yiyo loo nto iphupha lomsebenzi
Ukwamkelwa emva kwesicelo akuqwalaselwa njengophawu olubi kudliwanondlebe lomsebenzi oluzayo ngokuchazwa kwephupha. Endaweni yoko, uphawu lwephupha lwenzelwe ukwenza ukuba umntu ekubhekiswa kuye azi ukuba akazithembi ngokwaneleyo. Akaqinisekanga ngokwaneleyo ngesiqu sakhe. Kufuneka sisebenze ngokukhawuleza kule nto.
Isicelo seVisa njengophawu lokuphupha
Ehluke ngokupheleleyo kumaphupha esicelo somsebenzi zezo kufuneka ufake isicelo sevisa ngaphandle. Bathetha ukuba umntu oleleyo ulangazelela utshintsho kunye nokwahluka. Ufuna ukuba namava amatsha ngokupheleleyo. Awuyi kuvumela nantoni na ukuba ikunqande. Akukho sithintelo siphezulu kuye.
"Ukusetyenziswa" kwesimboli sephupha - ukutolika ngokubanzi
Ngokusisiseko usetyenziso lunokuba sephupheni kwaye lubonise Okulandelayo. Abo bachaphazelekayo baya kufumana oko bakufunayo kwikamva labo lobuchwephesha, kodwa basadinga umonde omncinci. Izinto ezithile zithatha ixesha kunye nokuphambuka kunokuba yimfuneko ukuze ekugqibeleni ufezekise iinjongo zakho. Ukusondela kwakho kulowo unqwenelekayo womsebenzi ephupheni lakho, impumelelo iya kubonakala ngokucacileyo kwinyani. Ke kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba ubuphupha nje ubhala amaxwebhu esicelo okanye sele unedinga lodliwanondlebe.
Ngapha koko, isicelo somsebenzi ephupheni siyakwalatha khu phiswano kubomi bemihla ngemihla. Abantu abaninzi kwindawo yamaphupha baneenjongo ezifanayo nezakho. Ngoku ngumcimbi wokuhlangabezana nomceli mngeni. Ukuba ungawasebenzisa amandla akho kunye neetalente zakho ngokusemandleni akho, uya kuthi ekugqibeleni ube nakho ukubonisa abanye ngawe.
Kuyafana ukuba umntu uphupha ngesemina yesicelo. Kule meko, kugxilwe kukwakho ngokwakho talente kunye nezakhono. Umntu ochaphazelekayo ufuna ukuzazi ngcono kwaye abone ukuba loluphi ukomelela anako ngokwenene.
"Ukusetyenziswa" kwesimboli sephupha-ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwamaphupha ezengqondo, usetyenziso lubonisa umnqweno wobuqu utshintsho. Oku akufuneki ukuba kubhekisele kuphela kwinqanaba lobungcali, kodwa kunokubhekisa nakwezinye iinkalo zobomi. Umphuphi akaziva anelisekile kwaye uhlala kwimeko yakhe yangoku. Ungathanda ukuhlengahlengisa ubomi bakho bemihla ngemihla kunye nendlela yakho yobomi ngokwahlukileyo, ufumane amava amatsha.
Ngokwe-psychoanalysts, nabani na ophupha ngokubonisa udliwanondlebe ngexesha lesicelo kwisuti unamathela kakhulu kubo impembelelo yangaphandle. Umphuphi ufuna ukubonakala emhle phambi kommelwane wakhe kwaye ufuna ukwamkelwa. Ukuba ubona abo wayesebenza nabo ngaphambili okanye owayesakuba ngumqeshi kwakho emva kwesicelo esiphumeleleyo kunye notshintsho lomsebenzi, oku kunokukhuthaza ukuzimisela ngakumbi ukusebenzisana. Iphupha lomsebenzi odlulileyo li lumkisa ngokuphindaphinda impazamo kwixesha elidlulileyo emva kokugqitywa.
"Ukusetyenziswa" kwesimboli sephupha-ukutolikwa kokomoya
Ngokwendlela yokutolika, isicelo sephupha sifuna ukwazi kunye nomnqweno wokufumanisa. Umntu kufuneka azame iindlela ezintsha zokomoya ukuphonononga.